Nxibelelana nathi-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umxhasi Qhagamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » Qhagamshelana nathi
Ifektri yeRadioUSER Radio Station eGuangzhou
I-FMUSER iofisi yaseGuangzhou ikwisithili saseTianhe eliziko leCanton. Kufuphi neCanton Fair, isikhululo sikaloliwe i-guangzhou, indlela ye-xiaobei kunye ne-dashatou, kufuneka kuphela imizuzu eli-10 ukuba uthatha i-TAXI. Wamkelekile abahlobo kwihlabathi liphela ukuba bandwendwele kwaye baxoxe.
Idilesi: No.305 Igumbi HuiLan Isakhiwo i-No.273 Huanpu Road TianHe District Guangzhou China Zip: 510620
I-FMUSER Iqela le-Inc Ngaba ngumvelisi wezinto eziphezulu onobuchwephesha obusebenza ngokuyila, ubunjineli, ukuvelisa, kunye nentengiso yeentengiso ezikumgangatho ophakamileyo zeMethumngeni ye-FM kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. Singomnye wabathengisi abakhulu bezinto zokuhambisa e China.
Ngama-6 eminyaka yamava kwicandelo lokuhambisa i-fm, siphumelele udumo olukhulu kunye neemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo esemagqabini. Sibonelela ngeenkonzo zonxibelelwano zobungcali kunye neengcebiso zokuthengisa kunye nasemva kweenkonzo zokuthengisa. Ishishini lethu lafikelela kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela njenge-United States, United Kingdom, Germany, France, Japan, Spain, Sweden, Europe, Middle East, Southeast Asia njalo njalo. Ngaphandle koko, senze uninzi lwee-oda ze-OEM kubathengi bethu.
Iimveliso zethu zibandakanya i-0.1w transmitter, i-0.5w transmitter, 1w transmitter, 5w transmitter, 7w transmitter, 10w transmitter, 15w transmitter, 30w transmitter, 30w amplifier, 1 ~ 1000w transmitter. Ngaphandle koko, sinezinto zokuhambisa ezinjengee-antenna ze-GP, umbane, intambo yokulalelwayo kunye ne-RG58 antenna cable. Apha kulandele umfanekiso wegalari yeemveliso zethu eziphambili:
Izinto ezihanjiswayo zinokusetyenziselwa iindawo ezininzi kunye neendawo, ezinje ngebala, ikhampasi, izinto ezenziwe ngobuchule nokunye. Lo mfanekiso ulandelayo ubonakalisa ezinye zezinto ezisetyenziselwa ukuhambisa i-fm, kunye nobunjineli bethu
Sijonge ekuboneleleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kuphela, kodwa nakwinkonzo zobungcali bovavanyo lomsebenzi. Nokuba yeyiphi na into yokusasaza onayo engqondweni, siya kusebenza kunye nawe ngokukhawuleza ukufumana imveliso efanelekileyo yeprojekthi yakho. Ke ukuba unoluhlobo lokusebenzisa umdlulisi, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, siya kukunceda ufumane isisombululo esifanelekileyo ngokukhawuleza.
Ungahlawula njani ukuze uyithenge?
Yonke iphepha lethu lezinto ezinoluhlu oluphezulu kwiwebhusayithi yethu a PayPal uphawu lokuhlawula.
1. Iakhawunti yethu yePayPal: kitmanlaw@gmail.com
2. Hlawula ngeGram yeMali:
Igama elipheleleyo: Quan Li
Igama lokuqala / Igama elinikiweyo: QUAN
Igama lokugqibela / Ifani: LI
3. Intlawulo ye-Western Union:
4.Hlawula ngo-T / T:
Iakhawunti NO: 127 854982 833
Igama elifumeneyo: LI QUAN
Igama leBhanki: I-HONG KONG KUNYE NE-SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Idilesi yeBhanki: I-1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG
Ikhowudi ekhawulezayo: HSBCHKHHHKH
Ikhowudi yeBhanki: 004
** Ukuba ugqithisela imali kwiakhawunti yethu yebhanki kwi-Hongkong naseShanghai Banking Corporation (HSBC), ungawushiya umyalezo endaweni yokubeka ingxelo ngaphandle kokuthintelwa komxholo.
Sizithumela njani izinto kuwe?
* Amanqaku aya kuthunyelwa ngaphakathi kweentsuku zokusebenza eziyi-1-3 xa intlawulo icacile.
* Siza kuyithumela kwidilesi yakho ye-PayPal. Ukuba ufuna ukutshintsha idilesi, nceda uyitshintshe ngaphambi kokuba uhlawule. Okanye ungaqhakamshelana nathi ngqo ngaphambi kokuba kuthunyelwe.
* Ukuba iiphakheji zingaphantsi kwe-0.5kg, siya kuthunyelwa nge-imeyile; iya kuthatha malunga ne-15-25sdesandleni sakho. Ukuba iphakheji imalunga ne-1 ~ 3kg, siya kuthumela nge-EMS, iya kuthatha malunga ne-7 ~ 15days kwisandla sakho. Ukuba iphakheji engaphezulu kwe-3kg, siya kuthumela nge-DHL. Kuya kuthatha malunga ne-3 ~ 7days kwisandla sakho. Zonke iiphakheji zivela eChina Guangzhou.
* Iphakheji iya kuthunyelwa "njengesipho" kwaye i-declear incinci kangangoko kunokwenzeka, umthengi akufuneki ahlawule nge "TAX"
* Emva kokuthumela ngenqanawa, siya kukuthumela i-imeyile kwaye sikwazise inombolo yomkhondo.
Ukuba unawo nawuphi na umbuzo, nceda unxibelelane nathi ku: kitmanlaw@gmail.com
skype: lanyuearcher99991 whatsapp: +86 13602420401
Okanye usebenzise le fomu yoqhakamshelwano:
Sithumele imibuzo, izimvo okanye imibuzo yamkelekile.
*(Ibonisa intsimi efunekayo)
Idilesi ye-imeyile kwakhona: *
Nceda ufake idilesi ye-imeyile okwesibini.
Indlela yokuhlawula eyakhiwe kakuhle
khetha uphando Qhagamshelana ngokubanzi ingxelo izimvo
I-CAPTCHA Code: *